पोखरामा पेट्रोल पम्पबाट तेल हालेर निस्किएको मोटरसाइकल अर्को सवारीसँग ठो,क्कियो: आगोले बल्यो, बन्यो खरानी (भिडियो सहित) – पुरा पढ्नुहोस्……
पोखरा । पोखराको नयाँबजारमा दुईवटा मोटरसाईकल दुर्घट्ना हुदा जलेर नष्ट भएका छन् । नयाँबजार स्थित बृहस्पति पेट्रोल पम्पबाट तेल हालेर निस्किएको मोटर र नयाँबजारबाट पृथ्वीचोक तर्फ जादै गरेको मोटर साईकल आपसमा ठक्कर खादाँ सो दुर्घ;ट्ना भएको हो ।
दुर्घटनामा ग १४ प ३८६१ नम्बरको पल्सर २२० र ग१६प ४४४१ नंम्बरको सुपर स्पिलिन्डर मोटरसाईकल आपसमा ठोक्किएर दु^र्घट्ना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता एंव डिएसपि सुवास हमालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार दुर्घट्नामा परि ४ जना सामान्य घाईते भएका छन् ।
उनिहरुको दाहिने हातमा चोट लागेको र उपचारका लागि गण्डकी मेडिकल कलेज लगिएको प्रवक्ता हमालले बताउनुभयो ।
दुर्घ,ट्ना लगत्तै आगालागि भएकाले मोटरसाईकलहरु जलेर पुर्ण रुपमा नष्ट भएका छन् । आगो निभाउन दमकल समेत आउनुपरेको प्रत्यक्षदर्शीहरुले बताएका छन् । दुर्घट्ना स्थलको नजिकै पेट्रोल पम्प समेत रहेकाले ठुलो दु*र्घट्ना हुनबाट बचेको स्थानियहरुले बताएका छन् ।
Prevकोरो,नाबाट बच्न सुनको मा,स्क बनाएर लगाउने यी को हुन् ?
Nextभोजपुरका यी जुम्ल्या”हा एकसाथ ब्रिटिश आ;र्मीमा भर्ती
कालिन्चोक भगवतीको बारे सबैले हेर्नै पर्ने यस्तो भि’डियो सबैले हेर्नुहोला सक्दो सेय’र गरौ
इन्डिएन आइडलमा नेपाली ठिटो यसरी उदाहरण सहित ” कालापानी हाम्रो हो, भन्दै यसरी गर्जिय हेर्नुहोस ( भिडियो सहित)
भाइरल बखत बिष्टले बखतले भेटाए २ करोड रुपैयाँ, प्रहरीलाई बुझाए ! पाए ५ लाख इनाम -हेर्नुहोस(भिडियो सहित)